နှင်းဖုံးကာမျက်မှန်ကိုဝတ်သင့်သည့်အချိန် - ULLER
နှင်းလျှောစီးခြင်းသို့မဟုတ်နှင်းလျှောစီးခြင်းကဲ့သို့သောအားကစားကိုလေ့ကျင့်သည့်အခါသင်၏ရူပါရုံကိုဂရုစိုက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအတွဲကိုသုံးဖို့ပါ နှင်းလျှောစီးမျက်မှန် (စမျက်နှာဖုံးများကိုခေါ်သို့မဟုတ် ဆီးနှင်းကာမျက်မှန်) သင်၏အစင်းများသို့မဟုတ်နှင်းလျောစီးများသို့မဟုတ်ဘွတ်ဖိနပ်များနှင့်သင့်လျော်သောအပူအ ၀ တ်အစားများကိုဝတ်ဆင်ခြင်းသည်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဆီးနှင်းအားကစား၌ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှု၏ကြီးမားသောရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးနှင့်အမြင်အာရုံသွက်လက်ပေါ်မူတည်။ အမှန်တရားအကောင်းဆုံးသာအတူဖြစ်ပါတယ် Blizzard မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး ငါတို့ဟာဆီးနှင်းမှာစွန့်စားမှုအားကစားလေ့ကျင့်တဲ့အခါသင်လိုအပ်တဲ့ရူပါရုံကိုအောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
နှင်းဖုံးနေသည့်ဒေသများရှိသဘာဝအန္တရာယ်များကိုကျော်လွှားရန်သင်အဆင်သင့်ရှိသည်ဟုသင်ခံစားရပါသလား။ သင်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးဖြစ်ခြင်းကိုသင်တန်ဖိုးထားမည်မှာအရေးကြီးဆုံးအချက် ၅ ချက်ကိုဆက်ဖတ်ပါ ဆီးနှင်းကာမျက်မှန်!
ဤရွေ့ကားသင်၏ Goggles ဝတ်ဆင်ရန်အရေးကြီးဆုံးအချိန်များမှာ!
၁။ Blond တစ်ခုချဉ်းကပ်တဲ့အခါ
၎င်းသည်အလွန်ပြင်းထန်သောလေများဖြင့်မုန်တိုင်းများကို Blizzard သို့မဟုတ် Snowfall ဟုခေါ်သည် ငါတို့မြင်နိုင်တာကိုမီတာအနည်းငယ်မကန့်သတ်ထားဘူး။ ၎င်းသည်နှင်းဖုံးဒေသများ၌အလွန်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတွင်ရေခဲလေညင်းများတပ်ဆင်ထားခြင်းကြောင့်ဆက်စပ်အန္တရာယ်များနှင့်ဆက်နွှယ်သောအခြေအနေများဖြစ်သည်။ (တစ်နာရီလျှင် ၅၆ ကီလိုမီတာခန့်) သုညဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအပူချိန်နှင့်အတူ။
အ ဝက်ခြံ သူတို့တည်နေရာပေါ်မူတည်။ သူတို့ကို "အနိမ့်" သို့မဟုတ် "မြင့်" သို့ခွဲခြားထားတယ်။ ဤဖြစ်ရပ်များသည်သူသည်သင့်တော်သောပြင်ဆင်မှုနှင့်ကာကွယ်မှုမရရှိပါကဆီးနှင်းတွင်းရှိအားကစားသမားကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်နိုင်သည်။
အ ဝက်ခြံ ၎င်းတို့သည်အနည်းဆုံး (၃) နာရီခန့်ကြာသောပြင်းထန်သောပြင်းထန်မှုနှင့်အတူပေါ်ပေါက်လာသည်။ ၎င်းတွင်ရေခဲများ၊ အကိုင်းအခက်များ၊ ၎င်းသည်အားကစားသမား၏အမြင်အာရုံနှင့်လုံခြုံမှုကိုအကန့်အသတ်ဖြစ်စေပြီးသူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၊ ဦး ခေါင်းနှင့်မျက်လုံးများအားပြင်းထန်စွာထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ဒီအချိန်အခါဟာအားကစားကိုနှစ်သက်တဲ့သူအားလုံးအတွက်အဓိကသော့ချက်ပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကာယပိုင်းအရ၎င်းတို့ကိုယူရန်အလွန်ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားရခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုthe်းပွင့်၌အားကစားလေ့ကျင့်နေသည့်အချိန်တွင် Blizzard ကိုခံနိုင်ရည်ရှိလျှင်သင့်တော်သောပစ္စည်းကိရိယာများကိုသယ်ဆောင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤအခိုက်အတန့်အတွက်လိုအပ်သောအသုံးအဆောင်များကိုကောင်းစွာပြင်ဆင်ရန်သတိရပြီးသင်၏ Blizzard မျက်မှန်ကိုကောင်းစွာဝတ်ဆင်ရန်အမြဲသတိရပါ သင်၏ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုထက်စေလော့ ဤအခြေအနေများအောက်မှာ။ အကယ်၍ သင်သည် Blizzard ကိုတွေ့ပါကဖြစ်နိုင်လျှင်အနီးအနားရှိအမိုးအကာကိုရှာပါ။ သို့သော်အမြဲတမ်းအခြေခံအားဖြင့်ပြန်ဆင်းရန်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအချို့အမြင့်ကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့်ဆီးနှင်းဖြူမှရောင်ပြန်ဟပ်လျှင်အထူးသဖြင့်နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်သည် (၁၁ နာရီမှ ၃ နာရီထိ) တွင်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သည်ကိုဘယ်တော့မျှမမေ့ပါနှင့်။ ၎င်းဖြစ်သည့်အခါအရေပြားနှင့်မျက်လုံးပျက်စီးခြင်းနှင့်နေလောင်ခြင်းအန္တရာယ်များကိုတိုးပွားစေသည်။ အမြင့်ဆုံးနာရီများ၌ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များ၏ဆိုးကျိုးများတိုးများလာသဖြင့်ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ စိတ်ပူပန်ခြင်းအားဖြင့်နွေရာသီတွင်မနက် ၉း၀၀ နာရီကိုမျက်လုံးကျန်းမာရေးနှင့်မြင်နိုင်မှုအတွက်အန္တရာယ်ရှိသောအဆောတလျင်နာရီအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
အထူးသဖြင့်မွန်းတည့်ချိန်၌ကျွန်ုပ်တို့သည်နှင်းလျှောစီး။ နှင်းများကိုစီးသည့်အခါအားကစားသမားသည်မျက်လုံးများ (ခေါင်းပေါ်မှမဟုတ်ဘဲ) လက်တစ်ချောင်းကိုအမြဲဝတ်ဆင်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Blizzard မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး သို့မဟုတ်အရည်အသွေးနှင်းလျှောစီးမျက်နှာဖုံး။ နှင်းဖုံးနေသည့်နေရာများရှိအလင်းပိုလျှံမှုကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရန်နှင့်နေရောင်ခြည်မှတိုက်ရိုက်ပျက်စီးခြင်းမှမျက်စိကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်အာရုံကိုလုပ်ဆောင်ရန်နှင့်စွန့်စားမှုအားကစားကိုလေ့ကျင့်သည့်အခါအမြဲတမ်းကောင်းစွာကာကွယ်ထားရမည်ဖြစ်ပြီးဘယ်သောအခါမျှအလျှော့မပေးသင့်ကြောင်းသတိရပါ အကယ်၍ သင်သည်ကောင်းသောနှင်းဖုံးကာမျက်မှန်တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါကအလင်းပိုလျှံခြင်းကသင်၏အမြင်အာရုံကိုဝေးလံသောနေရာနှင့်ဝေးကွာသောနေရာများတွင်ထိခိုက်နိုင်ပြီး၊ အမြင်အာရုံကြည်လင်ပြတ်သားမှုကိုလျှော့ချရန်အကြံပြုခြင်းမရှိပါ။
တစ်နေ့တာ၏အမြင့်ဆုံးနာရီများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသားအရေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိကိုကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရယ်အများဆုံးဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျန်နာရီများသည်လည်းအန္တရာယ်မရှိဟုမဆိုလိုပါ။ နေရောင်ခြည်၏ရောင်ခြည်သည်အရုဏ်မှမွန်းတည့်ချိန်အထိတိုင်အောင်ဖြစ်စေ၊ နေရောင်ခြည်များသည်ထိုမိုclouds်းတိမ်များကိုဖြတ်ကျော်နိုင်သည်! သငျသညျခြောကောင်းသောယူခြင်းတန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ် ဆီးနှင်းကာမျက်မှန်အချိန်တိုင်း။
တိုင်းအစွန်းရောက်အားကစားသမားများအတွက်အရေးအပါဆုံးအချိန်လေးတစ်ခုဖြစ်သည် အားကစားပြိုင်ပွဲ။ ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်သောအားကစားသမားများ adrenaline များအတွက်ရေငတ်နီးပါး insatiable ဖြစ်ပါတယ်။ အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင်သံသယမရှိ၊ ယုံကြည်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အရည်အချင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိရုံသာမကသင့်လျော်သောပစ္စည်းကိရိယာအားလုံးကိုသယ်ဆောင်ရန်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြုံရချိန်မှာသူဟာအရာအားလုံးကို ၀ တ်ဆင်လေ့ရှိပြီးသူဟာကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားရမယ်။ သင်နှင်းလျှောစီးနေစဉ်သို့မဟုတ်နှင်းများကျသောအခါသင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုသည်ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီရန်နှင့်မှန်ကန်စွာစီမံခန့်ခွဲရန်လုံးဝအာရုံစိုက်ရမည် Blizzard မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး ဆီးနှင်းများတွင်ပြင်းထန်သောပြိုင်ပွဲများတွင်သင်ပါ ၀ င်သည့်အခါသင်၏အမြင်အာရုံကိုဂရုစိုက်ကာအကာအကွယ်ပေးသည့်နေရာကောင်းဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဆီးနှင်းအားကစားများတွင်သင်ကိုယ်တိုင်ကိုမိတ်ဆက်ပါကသင်သည်ဆီးနှင်းပေါ်တွင်မည်သို့လမ်းလျှောက်ရမည်၊ တောင်ပေါ်သို့တက်သည့်အခါနှင်းလျှောစီးသို့မဟုတ်နှင်းလျှောစီးများကိုသယ်ဆောင်ရန်နည်းနည်းသင်ယူသည်မှာသေချာသည်။ ရုတ်သိမ်းဖို့။
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာစွန့်စားမှုအားကစားနဲ့ဆီးနှင်းအားကစားတွေမှာစတာကနှစ်ပေါင်းများစွာကျွမ်းကျင်သူတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအစကနေစတာပါ။ တစ်ဖက်ကကြည့်ရတာရိုးရှင်းပြီးအခြားတစ်ခုကအရမ်းရှုပ်ထွေးတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာတကယ်စွန့်စားသူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ဘာမှမတားဆီးနိုင်ပါဘူး။ လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ။ သို့သော်သင်ဘာမျှမရပ်တန့်ရန်အရေးကြီးရုံသာမကသင်လုပ်သမျှအားလုံးကသင့်ကိုရှေ့ဆက်သွားရန်အရေးကြီးသည်။ ယခုတွင်သင်သည်ပြိုင်ပွဲများကိုကြည့်ရှုပြီးအတန်းသို့တက်။ လှုပ်ရှားမှုအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်များစွာလေ့ကျင့်သည်။ သို့သော်သင်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်သင်ပြုလုပ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ငယ်များကသင့်အားအကောင်းဆုံးအားကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
သင်အဝတ်အစား၊ အပူအ ၀ တ်အစား၊ ဘွတ်ဖိနပ်၊ ဘုတ်သို့မဟုတ်နှင်းလျှောစီး၊ နှင်းလျှောစီးမျက်နှာဖုံး။ သင့်အတွက်သင့်တော်သောသူများကိုရှာပြီးအားကစားနှင့်အတူတူခံစားပါ။
သင်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အထူးသဖြင့်၎င်းတို့အားသယ်ဆောင်ရန်အရေးကြီးကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည် Blizzard မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး နှင်းဖုံးနေစဉ်သင်၏အမြင်နှင့်သင်၏မျက်နှာကိုကာကွယ်လိမ့်မည်။
5. အကယ်၍ သင်သည်အထူး၊ မှန်ကန်သောသို့မဟုတ်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောမှန်ဘီလူးလိုအပ်လျှင်
သင့်တွင်မျက်လုံးအခြေအနေများဖြစ်သော Presbyopia, hyperopia သို့မဟုတ် astigmatism ရှိလျှင်သင်အချို့ဝယ်ရန်လိုအပ်သည် ဆီးနှင်းကာမျက်မှန် နှင်းလျှောစီးတာကိုလုပ်တဲ့အခါသင့်ရဲ့အမြင်အာရုံအခြေအနေကအမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်မှာပါ။ မင်းရဲ့ပုံသေနည်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အထူးမှန်ဘီလူးတစ်ခုရှိရမယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်သင်ဝယ်တဲ့မျက်နှာဖုံးတွေရှိရမယ် လဲလှယ်သံလိုက်နှင်းလျှောစီးကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး။
ချိန်ညှိနိုင်သောနှင်းလျှောစီးမျက်နှာဖုံးများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တည်ရှိပြီးအားသာချက်များစွာရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာ၎င်းတို့သည်လုံလောက်သောအမြင်အာရုံကိုအာမခံနိုင်ပြီးဒုတိယတစ်ခုမှာလိုအပ်သည့်အတိုင်းအဆင့်မြင့်မှန်ဘီလူးများဖြင့် optical clip ကိုအလွယ်တကူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပုံမှန်မျက်မှန်များနှင့်မည်သည့်အားကစားကိုမဆိုလေ့ကျင့်ရန်မသင့်ကြောင်းသတိရပါ။ ၎င်းတို့သည်သင့်မျက်လုံးအခြေအနေနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်ထားရမည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဓာတ်ပုံ sensitivity ကဲ့သို့ကွဲပြားသောအခြေအနေတစ်ခုနှင့်ကြုံတွေ့နေရသောသူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်သင်လည်းကောင်းသောအရာအချို့ကိုသယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည် Blizzard မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး ဒါကသင့်မျက်မှန်ထဲမှာအသုံးပြုတဲ့မှန်ဘီလူးအမျိုးအစားကိုပြောင်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
နှင်းဖုံးဒေသများရှိရာသီဥတုနှင့်တောက်ပမှုသည်ပုံမှန်ထက်အလွန်ပြင်းထန်ပြီးတစ်ခဏနှင့်တစ်ခြားခြားနားနိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ မင်းရှိရင် လဲလှယ်မှန်ဘီလူးနှင့်အတူသံလိုက်မျက်မှန် သင်လိုအပ်သည့်အခါသင့်လျော်သောအရာကိုသုံးရန်ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည် ဆီးနှင်းကာမျက်မှန် စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း!
၄ င်းတို့တွင် UV-400 ကာကွယ်မှု ၉၉% သို့မဟုတ် ၁၀၀% အကာအကွယ်မရှိဘဲအကာအကွယ်ရှိရမည်။ သို့မဟုတ်ပါကသင်၏အမြင်အာရုံကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ဝယ်ယူရန် Blizzard မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး အပြန်အလှန်လဲနိုင်သောသံလိုက်မှန်ဘီလူးများဖြင့်ရာသီဥတုနှင့်တောက်ပမှုအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖန်အမျိုးအစားကိုသင်အလွယ်တကူရွေးချယ်နိုင်သည်။
အ ဆီးနှင်းကာမျက်မှန် သင်ရွေးချယ်သောအကောင်းဆုံးရှင်းလင်းပြတ်သားမှုနှင့်နှင်းလျှောစီး။ နှင်းလျှောစီးသည့်အခါကွဲပြားခြားနားသောနှင်းဖုံးနေသောမြေမျက်နှာသွင်ပြင်ကိုဖော်ထုတ်ရန်သင့်တော်သောစက်လုံးအမြင်တစ်ခုပေးသင့်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူသင်သည်တောင်စောင်းများနှင့်တောင်ကုန်းများကိုအကောင်းဆုံးအမြင်၊ ပုံပျက်ယွင်းမှုနှင့်အရံကောင်းမွန်သောအမြင်အာရုံကိုကောင်းမွန်စွာမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
ရွေးချယ်ပါ Blizzard အတွက်မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး မုန်တိုင်းထန်သောနေ့များ၊ မြက်ပင်များနှင့်မြင်နိုင်စွမ်းနည်းသောနေ့ရက်များတွင်မြူများ။ Anti-fog coating ဖြင့်အလွှာနှစ်ထပ်ရှိနှင်းလျှောစီးကာမျက်မှန်တပ်ရန်အကြံပြုချက်မှာအများဆုံးဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားသင့်ရဲ့နှင်းလျှောစီးကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးအပူအပူစီးဆင်းလိမ့်မယ်တဲ့အတွင်းပိုင်းလေဝင်လေထွက်စနစ်ကဆက်ကပ်။
ဝယ်ယူ Blizzard မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး သင့်ခေါင်းနှင့်သင့် ဦး ထုပ်နှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ကောင်းမွန်သော anti-slip တိပ်ခွေများပါ ၀ င်ပါ။ ပိုထူလေပိုကောင်းလေ!
ရွေးချယ်ပါ အကောင်းဆုံးနှင်းလျှောစီးမျက်နှာဖုံး လုပ်ဖို့အရမ်းလွယ်တယ်! သင်၏မျက်လုံးကိုဆီးနှင်းနှင့်ရောင်ခြည်နှင့်အထွေထွေရာသီဥတုတို့မှရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်သင်၏အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ။
နှင်းလျှောစီးနေစဉ်သို့မဟုတ်နှင်းလျှောစီးသည့်အခါမှန်ကန်သောကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည် adrenaline ကိုအပြည့်အဝခံစားရန်နှင့်ခံစားရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတွင်ကောင်းမွန်သောအရာများပါဝင်သည်။ ဆီးနှင်းကာမျက်မှန်။ အဲဒါကိုနောက်တစ်ခါမစောင့်ပါနဲ့။
ဤအားကစားကို၎င်း၏ပုံစံအမျိုးမျိုးတွင်လေ့ကျင့်သောအခါနှင်းလျှောစီးကာမျက်မှန်တပ်ထားခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ နှင်းလျှောစီးပုံစံများကိုသင်သိနှင့်ပြီလော။ အကောင်းဆုံးပုံစံများကိုသိရန်ဆက်ဖတ်ပါ